आइतबार सेप्टेम्बर 26, 2021 |
आइतबार सेप्टेम्बर 26, 2021
विषय — विषय- वास्तविकता
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: यूहन्ना 11: 40
“के मैले तिमीलाई भनेको थिइन? कि यदि तिमाले विश्वास गरयौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ?”- ख्रीष्ट येशू
उत्तरदायी पढाइ:2राजा 6: 15-17	•	रोमी 1: 17, 19, 20	•	सपन्याह 3: 15
15 एलीशाको सेवक त्यस बिहान चाँडै उठेको थियो। सेवक बाहिर निस्कियो अनि उसले देख्यो, शहलाई चारैतिर बाट घोडाहरू र रथहरू सहित सैनिकले घेरेको थियो।एलीशाको सेवकले एलीशालाई भन्यो, हे, मेरा मालिक, हामी के गर्न सक्छौ?
16 एलीशाले भने, नडरा! हाम्रोलागि लडाइँ गर्ने सेना अरामका लागि लडाइँ गर्ने सेना भन्दा ठूलो छ।
17 तब एलीशाले प्रार्थना गरे अनि भने, परमप्रभु, म बिन्ती गर्छु तपाई, मेरो सेवकको आँखा खोलि दिनुहोस् जसले गर्दा उसले देख्न सकोस्। परमप्रभुले युवा सेवकको आखाँ खोलि दिनुभयो अनि सेवकले देख्यो, पाहाड आगोको घोडा अनि रथहरूले घेरिएको थियो। तिनीहरू सबै एलीशाको वारिपरि थिए।
17 सुसमाचारले मानिसहरूलाई उहाँसँग धार्मिक बन्ने कुरो प्रकट गरेको छ। परमश्वरको बाटोले मानिसहरूलाई शुरूदेखि अन्तसम्म विश्वासद्वारा धार्मिकता तिर डोर्याउँदछ। जस्तो धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, जुन मानिस परमेश्वरको विश्वासमा ठीक रहँदछ उ अनन्त सम्म बाँच्नेछ।
19 परमेश्वरले आफ्नो क्रोध देखाउनुभयो, किनभने उहाँको बारेमा जान्नुपर्ने प्रत्येक कुरो परमेश्वरले स्पष्टसित देखाइदिनु भएकोछ। हो, उहाँले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू स्पष्ट बताई दिइसक्नु भएकोछ।
20 परमेश्वरको विषयमा धेरै कुराहरू छन् जुन मानिसहरूले देख्न सक्तैनन् उहाँकै अनन्तको शक्ति र अन्य थोकहरू जसले उहाँलाई परमेश्वर भनि चिनाउँछ। तर संसारको शुरूदेखि नै ती सबै चीजहरू बुझ्न मानिसहरूलाई सजिलो छ। ती थोकहरू स्पष्ट छन् जुन परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। यसैले ती सबै मानिसहरू आफूले गरेको खराब कामहरूबाट परमेश्वरदेखि उम्कन पाउँदैनन्।
15 इस्राएलका राजा परमप्रभु तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तिमीले कुनै नराम्रो घटनाको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्ने आवश्यक्ता छैन।
1. भजनसंग्रह 119: 12, 18
12 हे परमप्रभु, तपाईंको प्रशंसा होस्। मलाई तपाईंको विधिहरू सिकाउनु होस्।
18 हे परमप्रभु, मेरो आँखाहरू उघारी दिनुहोस् ताकि तपाईंका शिक्षाहरू हेर्न सकुँ अनि तपाईंका चमत्कारी कार्यहरू अध्ययन गर्न सकुँ।
2. यशैया 60: 2-4 (से 1st :), 18-20
4 आफ्नो वरिपरि हेर! देख्यौ मानिसहरू भेला भएर तिमीहरू तिरै आइरहेछ। ती टाढाबाट आइरहेका तिमीहरूकै छोराहरू हुन्। अनि तिमीहरूका छोरीहरू पनि उनीहरूसँगै आइरहेछन्।
18 त्यहाँ तिम्रो देशमा फेरि कहिल्यै अत्याचारको खबरहरू आउने छैनन्। मानिसहरूले फेरि कहिल्यै तिम्रो देशमा आक्रमण र चोरी गर्ने छैनन्। तिमीले आफ्नो भित्ताहरूको नाउँ ‘मुक्ति’ भनेर लेख्नेछौ। तिमीले आफ्नो प्रवेशद्वारको नाउँ ‘स्तुति’ राख्नेछौ।
19 घाम अब तिम्रो लागि दिनभरिको प्रकाश हुनेछैन्। चन्द्रमाको उज्यालो पनि तिम्रो लागि रातभरिको प्रकाश हुनेछैन्। किनभने परमप्रभुको प्रकाश नै सदा सर्वदा तिम्रो प्रकाश हुनेछ। तेरो परमेश्वर नै तेरो महिमा हुनुहुनेछ।
20 तिम्रो सूर्य कहिल्यै अस्ताउने छैन फेरि तिम्रो चन्द्रमा कहिल्यै अन्ध्यारो हुनेछैन फेरि। किनभने परमप्रभु नै अनन्तको प्रकाश हुनुहुनेछ। अनि तिम्रो शोकका दिन अन्त हुनेछ।
3.2कोरिन्थी 4: 1-4, 6, 17, 18
1 परमेश्वरले, आफ्नो दयाले हामीलाई यो काम गर्न दिनु भएकोछ, यसकारण हामी यो काम छोडदैनौं।
2 तर हामीले गुप्त र लज्जाजनक तरिका त्यागेका छौं। हामी छल कपट प्रयोग गर्दैनौं र परमेश्वरको शिक्षा परिवर्त्तन गर्दैनौं। अहँ! ठयाम्मै गर्दैनौं। हामी सत्य र सजिलोसित बुझाउँछौं। हामी को हौं भन्ने कुरो मानिसहरूलाई हामी यसरी नै देखाउँछौं। अनि हामी अनि परमेश्वर समक्ष हामी कस्तो मानिस हौं त्यो पनि उनीहरूले आफ्नो हृदयमा जान्न सक्छन्।
3 हामीले प्रचार गरेको सुसमाचार लुकेको होला तर यो तिनीहरूकै लागि लुकेको हो जो अल्मलिएका छन्।
4 यस संसारको शासनकर्त्ता जसले विश्वास गर्दैनन् ती मानिसहरूको मन अन्धा बनाइदिएको छ। यसर्थ तिनीहरूले ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको प्रकाश देख्न सक्तैनन्। ख्रीष्ट नै एक हुनुहुन्छ जो एकदमै परमेश्वर जस्ता हुनुहुन्छ।
5 हामी आफ्नो बारेमा प्रचार गर्दैनौं। तर हामी येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने सत्य कुरा प्रचार गर्छौं। अनि हामी प्रचार गर्छौं कि येशूको निम्ति हामी तिमीहरूका सेवक हौं।
6 परमेश्वरले एक पल्ट भन्नु भएको थियो, “अन्धकारबाट ज्योति चम्कने छ!” अनि उहाँ तिनै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृदयमा आफ्नो ज्योति प्रकाशित हुन दिनुभयो। ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्वरको महिमा झल्काएर उहाँले हामीलाई प्रकाश दिनु भयो।
17 यस घरी केही समयको निम्ति साना साना समस्याहरू सामान गर्दैछौं। तर ती समस्याहरूबाट हामीले अनन्त महिमा पाउने सहायता पाइरेहकाछौं त्यो अनन्त महिमा समस्याहरू भन्दा धेरै महान छ।
18 त्यसैले हामीले देख्ने नसकिने कुराहरू हामी सोच्छौं तर जे देख्छौं ती विषयमा होइन। प्रत्यक्ष देखिने कुराहरू क्षणिक हुन्छन् अनि हामीले देख्न नसकिने कुराहरू चाँहि सँधैको लागि हुनेछ।
4. यूहन्ना 4: 46-53
46 येशू गालील अन्तर्गत कानामा फेरि जानुभयो जहाँ येशूले पानीलाई दाखरसमा परिवर्तन गर्नु भएको थियो। त्यहाँ कफर्नहुममा एकजना राजाका अधिकारी थिए। त्यो अधिकारिको छोरो बिमारी थियो।
47 त्यस मानिसले यहूदियाबाट येशू गालील तर्फ आइरहनु भएको भनी सुने। तब येशूलाई भेट्न तिनी कानातर्फ गए। उसले येशूलाई कफर्नहुममा आउने अनि उसको छोरोलाई निको पारिदिन बिन्ती गरयो। उसको छोरो मर्न आँटेको थियो।
48 येशूले उनलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले आश्चर्यपूर्ण कुराहरू र चमत्कारिक चिन्हहरू हेर्नु पर्छ नत्र तिमीहरूले विश्वास गर्ने छैनौ।
49 राजाको अधिकारीले भन्नुभयो, महोदय, मेरो छोरो मर्न अघि मेरो घरमा एकपल्ट आई दिनुहोस।
50 येशूले उत्तर दिनुभयो, जाऊ, तिम्रो छोरो बाँच्नेछ। येशूले भन्नुएको कुरा त्यस मानिसले विश्वास गर्यो अनि घर र्फकि आयो।
51 घरजाँदै गर्दा बाटामा उसको नोकरसंग भेट भयो। नोकरले भन्यो, तपाईंको छोरो जाती भएको छ।
52 त्यस मानिसले सोधे, कुन समयबाट त्यो निको हुन थाल्यो?” उसको नोकरले उत्तर दियो, हिजो दिउँसो एक बजेदेखि तपाईंको छोरोको ज्वरो हट्यो।
53 त्यस अधिकारीले बुझ्यो कि येशूले उसलाई त्यही समयमा भन्नुभएको थियो, “तिम्रो छोरो जीवित रहनेछ। यसर्थ उनी लगायत घरका सबै मानिसहरूले येशूमाथि विश्वास गरे।
5. यूहन्ना 8: 2, 12, 32
12 नंतर येशू पुन्हा लोकांशी बोलू लागला. तो म्हणाला, मी जगाचा प्रकाश आहे, जो माझ्यामागे येतो तो कधीही अंधारात राहणार नाही. त्या माणसाजवळ जीवन देणारा प्रकाश राहील.
32 मग सत्य काय आहे हे तुम्हांला समजेल. आणि सत्य तुम्हांला मोकळे करील.
6. यूहन्ना 9: 1-3, 6, 7, 39-41
1 जब येशू हिडिरहनु भएको थियो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई देख्नु भयो। त्यो मान्छे जन्मैदेखि अन्धा थियो।
2 येशूका चेलाहरूले सोधे, गुरुज्यू यो मान्छे जन्मैदेखि अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? उसको आफ्नै पाप वा उसको माता-पिताको पाप?
3 येशूले उत्तर दिनुभयो, ‘यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन्। ऊ जन्मैदेखिको अन्धो हो ताकि उसलाई निको पारेर मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्ति देखाउन सकियोस्।
4 अहिले जब दिनको समय छ हामीले उहाँको कामहरू गर्नु पर्छ जसले मलाई पठाउनु भयो। रात पर्न आँटेको छ। अनि कसैले पनि राती काम गर्दैन।
5 जब म संसारमा छु, म संसारको ज्योति हूँ।
6 यसो भनिसकेर, येशूले भूँइमा थुक्नु भयो र त्यसबाट केही माटोको हिलो बानाउनु भयो अनि येशूले त्यसलाई त्यस मानिसको आँखामा दलिदिनुभयो भयो।
7 येशूले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमाको तलाउमा गएर पखाल। (सिलोआमको अर्थ हुन्छ ‘पठाउनु) तब त्यो मानिस तलाउमा गयो र धोयो। अब उ देख्ने लायकको भयो।
39 येशूले भन्नुभयो, म यस संसारमा न्याय गर्न आएको हुँ। म त्यसकारण आएको हुँ कि अन्धा मानिसहरूले देख्न सकोस्। म त्यसकारणले आएको हुँ कि देख्न सक्नेहरू अन्धा होउन्।
40 कोही फरिसीहरू येशूको नजिकै थिए। तिनीहरूले येशूले त्यसो भन्नु भएको सुने। तिनीहरूले सोधे, हामी पनि अन्धा छौं भनेर तिमी भनिरहेछौ?
41 येशूले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू साँच्चि नै अन्धा भएको भए तिमीहरू पापको दोषी हुने थिएनौं। तर अहिले तिमीहरूले देख्छु भन्यौ, यसकारण तिमीहरूको दोष रहिरहन्छ।
7. 1 कोरिन्थी 2:5(तिम्रो), 9, 10, 12
5 … तिमीहरूको विश्वास मानिसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस् भनि मैले त्यसो गरें।
8. कलस्सी 1: 13, 16, 21, 26, 27
13 अन्धकारको शक्तिबाट परमेश्वरले हामीलाई मुक्त गर्नु भएको छ। अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना प्यारा पुत्रको राज्यमा ल्याउनु भएको छ।
16 उहाँकै शक्तिद्वारा सारा थोक सिर्जित छ स्वर्ग र पृथ्वीका कुराहरू, दृश्य र अदृश्य कुराहरू, सिंहासन अथवा शक्तिहरू, शासकहरू अथवा अधिकारहरू, यी सब कुराहरू ख्रीष्टद्वारा अनि ख्रीष्टकै निम्ति बनाइएका हुन्।
21 एक समय तिमीहरू परमेश्वरदेखि अलग गरिएका थियौ। तिमीहरूको दुष्ट कर्महरू जो परमेश्वर विरोधी रहेको कारणले तिमीहरू परमेश्वरका शत्रु थियौ।
26 यो गोप्य सत्य शुरूदेखि नै सबै मानिसहरूबाट लुकाएको थियो। तर अब परमेश्वरको पवित्र जनलाई यो गोप्य सत्य प्रकट गराइएको छ।
27 त्यो धनी र महिमामयी सत्य आफ्ना मानिसले जानुन् भन्ने निश्चय परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यो महान सत्य सबै जातिहरूको लागि हो। अनि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ ख्रीष्ट स्वयं, जो तिमीहरू सबैमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमामा भागीदारी हुनु उहाँ हाम्रो एक आशा हुनुहुन्छ।
1. 472 : 24 (सबै)-26
सबै वास्तविकता भगवान र उहाँको सृष्टि, सामंजस्यपूर्ण र अनन्त मा छ। उहाँ जे बनाउनुहुन्छ त्यो राम्रो छ, र उहाँले बनाउनुभएको सबै बनाउनुहुन्छ।
त्यहाँ स्वर्ग, सद्भाव, र ईश्वरीय विज्ञान मा ख्रीष्ट को लागी एक तरीकाले हामीलाई यो बाटो देखाउँछ। यो कुनै अन्य वास्तविकता थाहा छैन-जीवनको कुनै अन्य चेतना छैन-राम्रो, भगवान र उहाँको प्रतिबिम्ब भन्दा, र तथाकथित दुखाइ र इन्द्रियहरु को आनन्द भन्दा माथि उठ्न को लागी।
जसको भलाइको साँचो बिचार छ उसले दुष्ट को सबै भावना हराउँछ, र यस कारण बाट आत्मा को अमर यथार्थहरु मा प्रवेश गरीरहेको छ। यस्तो एक जीवन मा रहन्छ, - जीवन को समर्थन जीवन को असमर्थ शरीर बाट प्राप्त छैन, तर सत्य को, आफ्नो अमर विचार उजागर। येशूले हुनुको साँचो विचार दिनुभयो, जसले नश्वरहरुलाई अनन्त आशिष् दिन्छ।
जब मनुष्यले भगवान र मानिस को बारे मा अधिक सही विचार प्राप्त गर्दछन्, सृष्टि को बहुउद्देश्यीय वस्तुहरु, जो पहिले अदृश्य थिए, दृश्यमान हुनेछन्। जब हामी बुझ्छौं कि जीवन आत्मा हो, कहिल्यै न कुनै पदार्थ मा, यो समझ आत्म-पूर्णता मा विस्तार हुनेछ, भगवान मा सबै, राम्रो, र अरु कुनै चेतना को आवश्यकता छैन।
5. 297 : 32 (रोग)-15
रोग, पाप, र मृत्यु मानव निष्कर्ष को अस्पष्ट वास्तविकता हो। जीवन, सत्य, र प्रेम ईश्वरीय विज्ञान को वास्तविकता हो। उनीहरु बिश्वास मा बिहानी र आध्यात्मिक समझ मा पूर्ण ओर्बड चमक। जसरी बादलले सूर्यलाई लुकाउँछ यो निभाउन सक्दैन, त्यसैले झूटा विश्वास केहि समय को लागी चुपचाप अपरिवर्तनीय सद्भाव को आवाज हो, तर झूटा विश्वास विश्वास, आशा, र फल संग सशस्त्र विज्ञान लाई नष्ट गर्न सक्दैन।
आध्यात्मिक भावना, भौतिक इन्द्रिय को विरोधाभास, अन्तर्ज्ञान, आशा, विश्वास, समझ, फल, वास्तविकता शामिल छ।
वास्तविकता आध्यात्मिक, सामंजस्यपूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत छ।
हुनुको वास्तविकता, यसको सामान्य कार्य, र सबै चीजहरु को मूल नश्वर भावना को लागी अदृश्य छन्; जबकि नश्वर विश्वास को अवास्तविक र नक्कली आन्दोलनहरु, जो अमर मोडस र कार्य को उल्टो हुनेछ, वास्तविक शैली हो। जो कोहि वास्तविकताको यो नश्वर दिमाग को अनुमान को खण्डन गर्दछ एक धोखेबाज भनिन्छ, वा ठगी भनिएको छ।
यदि गुरुले कुनै विद्यार्थीलाई लिएर परमेश्वरको नदेखेको सत्यता सिकाउनुहुन्नथ्यो भने, उहाँ क्रूसमा टाँगिनुहुन्नथ्यो। पदार्थ को पकड मा आत्मा धारण गर्ने संकल्प सत्य र प्रेम को सताउने हो।
भौतिक भावनाले आत्मा, भगवान लाई बुझ्न को लागी कहिल्यै मद्दत गर्दैन। आध्यात्मिक भावना को माध्यम बाट मात्र, मानिस बुझ्दछ र देवता लाई माया गर्दछ। भौतिक इन्द्रियहरु द्वारा मन को विज्ञान को विभिन्न विरोधाभासहरु अदृश्य सत्य परिवर्तन गर्दैनन्, जो सदैव बरकरार रहन्छ।
दृष्टि, श्रवण, मानिस को सबै आध्यात्मिक इन्द्रियहरु, अनन्त छन्। उनीहरु हराउन सक्दैनन्। तिनीहरुको वास्तविकता र अमरत्व आत्मा र समझ मा हो, पदार्थ मा छैन, - यसैले तिनीहरुको स्थायित्व।
पावल भन्छन्: "उहाँको अदृश्य चीजहरु को लागी, संसार को सृष्टि बाट, स्पष्ट रूप देखि देखीन्छ, बनाइएका चीजहरु बाट बुझिन्छ।" (रोमी 1: 20) जब आत्मा को पदार्थ ईसाई विज्ञान मा प्रकट हुन्छ, पदार्थ को शून्यता मान्यता प्राप्त छ। जहाँ भगवान को आत्मा छ, र त्यहाँ कुनै ठाउँ छैन जहाँ भगवान छैन, दुष्ट केहि हुदैन, - आत्मा को केहि को विपरीत। यदि त्यहाँ कुनै आध्यात्मिक प्रतिबिम्ब छैन, तब त्यहाँ मात्र खालीपन को अन्धकार रहन्छ र स्वर्गीय टिन्ट को ट्रेस छैन।
प्रकाश 21:1 मा हामी पढ्छौं: -
अनि मैले एउटा नयाँ स्वर्ग र एउटा नयाँ पृथ्वी देखेँ: पहिलो स्वर्ग र पहिलो पृथ्वी बितेर गयो; र त्यहाँ कुनै समुद्र थिएन।
प्रकाशक हाम्रो अस्तित्व को विमान मा थियो, जबकि अझै सम्म आँखाले देख्न नसक्ने देख्दै, - जो कि अनावश्यक सोच को लागी अदृश्य छ। होली रिट को यो गवाही विज्ञान मा यो तथ्य लाई कायम राख्छ, कि स्वर्ग र पृथ्वी एक मानव चेतना को लागी, त्यो चेतना जो भगवानले दिनुहुन्छ, आध्यात्मिक हो, जबकि अर्को को लागी, अपरिचित मानव मन, दर्शन भौतिक हो। यो अचम्मको देखाउँछ कि के मानव दिमाग सर्तहरु मायने छ र आत्मा राज्यहरु र चेतना को चरणहरु लाई संकेत गर्दछ।
यो वैज्ञानिक चेतना संगै अर्को प्रकाश थियो, स्वर्ग बाट घोषणा, सर्वोच्च सद्भाव, कि भगवान, सद्भाव को ईश्वरीय सिद्धान्त, मानिसहरु संग सधैं हुनुहुन्छ, र उनीहरु उहाँका मानिसहरु हुन्। यस प्रकार मानिस अब एक दुखी पापी को रूप मा मानीएको थिएन, तर भगवान को धन्य बालक को रूप मा। किन? किनभने स्वर्ग र पृथ्वी को सेन्ट जोन को शारीरिक भावना गायब भएको थियो, र यो झूठो भावना को स्थान मा आध्यात्मिक भावना थियो, व्यक्तिपरक अवस्था जसबाट उसले नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी देख्न सक्छ, जसमा आध्यात्मिक विचार र वास्तविकता को चेतना शामिल छ । यो निष्कर्ष निकाल्ने शास्त्रीय अधिकार हो कि यो अस्तित्व को वर्तमान स्थिति मा पुरुषहरु को लागी यस्तो अस्तित्व को सम्भव छ, र सम्भव छ, - कि हामी सचेत हुन सक्छौं, यहाँ र अब, मृत्यु, दु: ख, र दुखाइ को अन्त्य को। यो वास्तव मा निरपेक्ष ईसाई विज्ञान को एक पूर्वानुमान हो। हृदय लिनुहोस्, प्रिय पीडित, यो वास्तविकता को लागी पक्कै पनी केहि समय र केहि तरीका मा देखा पर्नेछ। त्यहाँ अब कुनै दुखाई हुनेछ, र सबै आँसु पखालिनेछ।
जब हामी ईसाई विज्ञान मा बाटो जान्दछौं र मानिसको आध्यात्मिक अस्तित्वलाई चिन्छौं, हामी देख्नेछौं र भगवानको सृष्टि बुझ्नेछौं, - पृथ्वी र स्वर्ग र मानिसको सबै महिमा।